Khatarta Hyperbaric Therapy Risks - Daaweynta Oxygen Hyperbaric Therapy HBOT
Home/Khatarta Hyperbaric Therapy Risks - Daaweynta Oxygen Hyperbaric Therapy HBOT
Khatarta Hyperbaric Therapy Risks - Daaweynta Oxygen Hyperbaric Therapy HBOTteknamfg2018-01-21T07:06:03+00:00
Qalabka HBOT ee Hyperbaric Oxygen Therapy
waa maxay Daaweynta Oxygen ee Hyperbaric? HBOT waa daaweyn loo ogolaaday FDA iyo AMA kaas oo bukaan-socodka neefsanaya 100% Oksijen darajo caafimaad ah halka cadaadiska qolka daaweynta lagu kordhiyey dhibco ka sareeya cadaadiska heerka badda. Caawimaadyadan si loo xoojiyo loona hormariyo awoodda dabiiciga ah ee jirka si ay u bogsato. HBOT waa badbaado, xanaaq la'aan, beddel aan ku habooneyn iyo / ama daaweynta dabiiciga ah. Guud ahaan, ma jiraan wax dhib ah oo la xidhiidha Qaadashada Hyperbaric Oxygen Therapy, laakiin dhibaatooyinka qaarkood ama saameynaha ayaa laga yaabaa inay la xiriiraan xaaladda asaasiga ah ee la daaweeyo.
Dhagaha Barotrauma - Way adag tahay in la dhameeyo dhegaha sababaha "kacsan" waxayna keeni karaan xanuun fudud oo dhexdhexaad ah. Barotrauma dhagta dhexe waa saameynta ugu badan ee daaweynta HBOT. Bukaanku wuxuu ka hortagayaa barotrauma adoo haraaya dhagahooda (isbarbar dhig) inta lagu jiro qolka qolka iyo jiirka. Qaar ka mid ah manuuvoorka sicir-bararka korontada ayaa loo isticmaali karaa, ama, tuubooyinka tympanotomy waxaa loo isticmaali karaa kuwa aan awood u lahayn in ay fiilaan.
Sinus Xanuun, Cudurrada Sare ee Neefsashada iyo Cudurka Sinusitis - Tufaaxa sinuska waxaa loo arkaa inay ka yartahay barotrauma dhegta dhexe. Antihistamines, daroogada, iyo / ama sunta sanka ayaa la isticmaali karaa ka hor inta aaney soo gelin qolka. Iyada oo adkaanshaha cadaadiska iyo gaabinta, caadiyan ma jiraan wax dhibaato ah.
Myopia iyo Cataract - Miyopia waa ciriiri ka gudubka soo noqnoqda ee soo noqnoqda HBOT. Marka cudurka myopia ee dhaca uu dhaco inta lagu jiro taxadarka daaweynta HBOT, ka dib marka la dhameeyo daaweynta, maqnaanshaha muuqaalku wuu is bedelayaa gabi ahaanba. Dardar-celinta koritaanka kateetarkeeda hadda jira ayaa ah cilad-darro soo noq-noqosho dheer oo muddo dheer soo gaartay cadaadiska ka dhanka ah 2 ATA. Warbixinnada la daabacay iyo sidoo kale khibrad daaweyneed oo ballaadhan ayaa muujinaya in caleenta cusub aysan soo saarin taxanaha 30 ee daaweynta 50 ee inta badan lagu isticmaalo Maraykanka.
Pulmonary - Calaamadaha sambabaha iyo neerfaha ee sunta oksijiinta ayaa inta badan lagu tilmaamaa walaac weyn oo la leh HBOT. Xaddidnaanta dulqaad la'aanta oksijiinta ee ka fogaanaya muuqaalkan ayaa si fiican loogu qeexay inay si joogta ah u soo gaadhaan dadka caadiga ah. Calaamadaha sambabada lama soo saaro maalin kasta oo lagu ogaanayo oksijiinka 2.0 ama 2.4 ATA saacadaha 2 ama 1.5. Xaaladda qulqulato oksijiinta marka la isticmaalayo shucaac la mid ah waxay ku saabsan tahay 1 daaweynta bukaanka 10,000. Xitaa marka qulqulo oksijiin ah ay dhacaan, ma jiraan wax saameyn ah oo hadhow ah haddii dhaawacyada farsamooyinka laga hortagi karo. Bukaan-socodka xirmooyinka marin-haweedka ayaa halis dheeraad ah u leh barotrauma sambabada inta lagu gudajiro. Barotrauma Pulmonary inta lagu jiro decompression waa dhif.
Cudurka Pneumothorax - Kaliya iska hor imaad buuxda ee HBOT waa pneumothorax aan la daaweyn. Cudurka qaliinka ee pneumothorax ka hor daaweynta HBOT, haddii ay suurtagal tahay, waxay ciribtiraysaa caqabadaha daaweynta. Raajada feeraha ayaa lagama maarmaan u ah inay ka taliso cudurka pneumothorax, haddii taariikhda caafimaad ee bukaan-socodka ay ka kooban tahay: 1) Taariikhda isugeynta 'pneumothorax spontaneous'; 2) Taariikhda qalliinka wadnaha; ama 3) Taariikhda dhaawaca laabta. Pneumothorax waa dhibaato, taasoo keeni karta neefsashada inta lagu jiro hannaanka.
Qalabka Oksijiin - Xaaladda suuxdinta waxaa lagu soo warramey 0.01% daaweynta 28,700 mana waligeed la soo sheegin wax ka yar 2.0 ATA saacad ama ka yar. Tixraac; Davis (1989) ayaa dib u eegay bukaannada 1505 ee lagu daweeyey 1979 iyo 1987 waxayna qabteen 52,758 laba saacadood. Oxygen Rabshaduhu waxay ka dhaceen bukaanada 5 keliya, (0.009%) dhammaantood si buuxda u soo kabsaday.
Claustrophobia - Claustrophobia, oo u muuqata in ay ku jirto 2% dadka guud, waxay keeni kartaa walaac badan oo qarsoodi ah. Dareemid fudud ayaa loo qori karaa bukaanka qaba walaac.
Ilkaha - Dhamaan shaqada ilkaha, kanalka xididka, iyo buuxinta waa in la buuxiyaa. Barotrauma ilkaha waa wax macquul ah. Bukaan-socodka waa inaysan helin daaweyn haddii ay haystaan ​​ilkaha ilkaha ee ku-meel-gaadhka ah ama xannibaadaha xididka aan dhicin.
Buugaagta Daaweynta Hyperbaric, KK Jain, MD, Vol. 1, 2, 3
Hawlaha Daaweynta Daawada Hyperbaric, Eric Kindwall, MD
Daryeelka Bukaanka Qaadashada Daaweynta Oxygen ee Hyperbaric, Hagaha Heerarka Daryeelka Bukaanka. 1988 Norkool, D
Qalabka Oxygen Therapy ee Hyperbaric: Warbixinta Guddiga 1999. UHMS
Fikradda Dhibicda. DAN
UHMS (Bulshada Takhaatiirta Hoose ee Hyperbaric)
IHMA (Ururka Daaweynta Hyperbaric Daaweynta Caalamiga ah)
IBUM (Guddiga Caalamiga ah ee Daawada Undersa Medicine)
NBDHMT (Tiknoolajiyada Qaranka ee Quusitaanka iyo Tiknoolajiyadda Caafimaadka Hyperbaric)